'सरस्वती पूजा वार्षिक गरिए पनि आराधना दैनिक गर्नुपर्छ' | नेपाली पब्लिक 'सरस्वती पूजा वार्षिक गरिए पनि आराधना दैनिक गर्नुपर्छ' | नेपाली पब्लिक
‘सरस्वती पूजा वार्षिक गरिए पनि आराधना दैनिक गर्नुपर्छ’
नेपाली पब्लिक २०७५, २७ माघ आईतवार ०६:३३
हरेक वर्षको माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन आज (आइतबार) विद्यालय तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाले पूजा-आराधना गरी सरस्वती पूजा मनाउँदै छन्। आजको दिनलाई श्रीपञ्चमी अर्थात् वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। विद्याकी देवी सरस्वतीको विधिपूर्वक पूजा-आराधना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा विद्या प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ।
सेतो वस्त्र धारण गरेकी, गोरो वर्णकी, चतुर्भुजा भएकी विद्याकी देवी सरस्वतीप्रतिको धार्मिक विश्वास र महत्त्वका बारेमा मोरङको सुन्दरहरैचा–५ मा रहेको नयाँ वृन्दावन गौशालाका संस्थापक संरक्षक गुरु श्री १०८ दीनबन्धु शास्त्री महाराजसँग नेपाली पब्लिकका संवाददाता खेमराज सापकोटाले गरेको कुराकानीः
श्रीपञ्चमीको शास्त्रीय महत्त्व कस्तो छ?
धर्मशास्त्रअनुसार श्रीको अर्थ, लक्ष्मी, सरस्वती र महामाया हो। आजको दिनलाई सरस्वती परिपूर्ण पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। विद्याकी देवी सरस्वती उनै हुन् भन्ने धार्मिक ग्रन्थमा पाइन्छ। धर्मशास्त्रअनुसार सर्वप्रथम व्याकरणलाई प्राण र त्यसमा सरस्वतीले ध्यान दिइएको मानिन्छ।
धर्मशास्त्रका अनुसार आजको दिन सरस्वती माता सर्वव्यापी फैलने हुनाले बालबालिकालाई आजकै दिनबाट अक्षरारम्भ गर्ने प्रचलन छ।
आजको दिनबाट काम थालनी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनिन्छ नि?
हो, आजको दिन सम्पूर्ण योग जुरेर आएको दिन हो। विद्या आर्जनदेखि जुनसुकै कर्म गर्न पनि आज योग, करण, शिशिर सबै शुभसाइत जुरेको हुन्छ। धार्मिक मान्यताका आधारमा पनि यसलाई शुभसाइत मानिन्छ।
पछिल्लो समयमा यो पर्वको शास्त्रीय पक्षलाई खासै महत्त्व दिइँदैन नि?
पहिलेको समयमा दैनिक नित्यकर्म गरिन्थ्यो। विद्यालयमा दैनिक स्तोत्र गरिन्थ्यो, तर अहिले कुनै विद्यालयमा यस्तो देखिन्न। वर्षमा एकपटक गरिन्छ। कुनै महत्त्व दिइँदैन। कतै गुरुकुलहरूमा अहिले पनि दैनिक नै नित्यकर्म गरिन्छ तर जुन अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले भने वर्षमा एक दिन मनाउँछन् र त्यो पनि कतिपय संस्थाले गर्दैनन्।
हाम्रो परिवेशमा जुन गर्नुपर्ने हो त्यो हुँदैन, नगर्नुपर्ने काम भइरहेको छ। सरस्वती विद्याकी देवी मानिन्छिन्। सरस्वती मातालाई त हामीले सदासर्वदा पूजा, आराधना गर्नुपर्छ। धर्मले त के भन्छ भने आराधनाबाटै सम्पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ नि !
आजकै दिनलाई चाहिँ किन विशेष मानिएको हो?
माताको आराधना दैनिक गर्ने हो। तर, आजको दिनमा सरस्वती माता सर्वव्यापी हुने भएकाले आजको दिन विशेष मानिएको हो। आज सरस्वतीको पूजा-आराधना गरी व्रत बस्ने र मिष्ठान्न भोजन मातालाई चढाउने गरिन्छ। र, आजबाट हर्ष र उमङ्ग सहितको होली पर्व शुरु भएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
आजको दिनलाई विद्यार्थीवर्ग र शिक्षकवर्गले विशेष उत्सवका रूपमा मनाए पनि दैनिक जीवनमा सरस्वतीको आराधना गर्दा सम्पूर्ण शरीरका अङ्गहरू स्वस्फुर्त हुने र दिमाग सदैव क्रियाशील रहन्छ।